Fandaniam-bola amin'ny bisy mora, fiara fitaterana amin'ny mpamily Madrid Fandaniam-bola amin'ny bisy mora, fiara fitaterana amin'ny mpamily Madrid
Fandaniam-bola amin'ny bisy mora, fiara fitaterana amin'ny mpamily Madrid
Fandaniam-bola amin'ny bisy mora
Fandaniam-bola amin'ny bisy mora, ahoana no hangatahana ny vidiny tsara indrindra amin'ny endrika na antso Telf 607372252 ary hanatrika haingana anao ianao, tsy miandry an-tserasera. Miantsoa ankehitriny! Buses any Madrid miaraka amin'ny hatsaratsaratsaratsaratsara sy ny vidin'ny vidiny.
Fandaniam-bola amin'ny bisy mora amin'ny seranam-piaramanidina madrid, station atocha, fampakaram-bady, fiombonana, fampisehoana, asa fanompoana
Raha te handefa teny ianao dia fenoy ity endrika manaraka ity ary hifanerasera haingana araka izay tratra.
Azonao atao koa ny miantso antsika amin'ny Telf + 34 607372252 na mandefa e-mail info@torresbus.es
Fanofana fiara - vidin'ny vidiny
Anarana sy ny anarany (ilaina)
Data na fitsangatsanganana:
Ampidiro ny daty (MENU DEPLEGABLE)
DAY01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 MesjanvierFebreromarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptambraOctubrenoviembredécembre TAONA201920202021
tendrombohitra (Ohatra 10: 15)
TIME123456789101112131415161718192021222324 : MINUTES00153045
Miverina amin'ny angona:
Ampidiro ny daty hiverina (MENU DEPLEGABLE)
DAY12345678910111213141516171819202122232425262728293031 MesjanvierFebreromarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptambraOctubrenoviembredécembre TAONA201920202021
Miverina ny fotoana (Ohatra 20: 30)
* Transfer* Ny fitsangatsanganana fotsiny* Andron'ny andro iray* Dia manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 6 andro* Fampakaram-bady* Citytour* Veloma* Company* Hafa
Wifi WC Mpitarika-Version VIP service sakafo karakaraina Guia
Ampahafantaro ny dian'izy ireo na ny serivisinao
TSY AZO AMPIASAINA AO AMIN'NY FANDAMINANA NY FANDAMINANA; MIVAVAHA MALAGASY MOMBA NY MIRALENTA ENY AMIN'NY CAPTCHA
En Fanofana fiara Torres Bus dia manana traikefa lava momba ny fitsangatsanganan-karama, fampakaram-bady, fifamoivoizana amin'ny seranana, fitsangantsanganana, hetsika ara-panatanjahantena, sns. Afaka mahazo ny tsara indrindra ianao vidin'ny hofan'ny bisy na mpanazatra ho an'ny fitsangatsanganana fanampiny, fitsangantsanganana, toeram-pambolena sy fiompiana, sns., dia afaka manao teti-bola ho an'ny sekoly izay manangona sy manome gazety isan'andro ho an'ny ankizy, any am-pianarana, amin'ny oniversite na amin'ny oniversite.
Mitady fiara karama amin'ny Budget Cheap in Madrid ve ianao?
Izahay dia manokana fitsangatsanganana isan-karazany:
Fandefasana toeram-piantsonan'ny lalamby
mivelona amin'ny vola fanampiana
toy ny dia lavitra; Manatanteraka karazana tolotra isan-karazany izahay:
Isika rehetra fiara fitateram-bahoaka y mpanazatra; Izy ireo dia omena ny fepetra fiarovana sy ny fepetra ilaina; takian'ny minisitry ny fitaterana; ho an'ny fitateran'ny mpivahiny sy ny mpampianatra, mba hahafahan'ireo mpanjifany mifandimby mitazona ny fepetra tsara indrindra fiarovana sy fampiononana.
Fandaniam-bola amin'ny bus amin'ny seranam-piaramanidina, mariazy
Ao amin'ny Bus Torres dia manampahaizana manokana izahay Rent buses y Mpanazatra ho an'ny fitsangantsanganana, fitsangantsanganana fizahan-tany, hetsika, fivoriambe, fitaterana mpiasa, fivoriambe, fitaterana institiota, sekoly sy faritra manodidina an'i Espaina. Afaka ihany koa isika manofa bus, bus na na minibus o minibus ho an'ny dia, hetsika o Boda.
Any Torres Bus dia manolotra anao ny fifandraisana tsara indrindra amin'ny vidin'ny vidiny; ny fanompoana fanofana mpanazatra o fiara fitateram-bahoaka; Tahaka izany koa no anoloranay anao manokana; ny mpandeha amin'ny biraon'ny birao sy ny mpamily fiofana. Afaka matoky tanteraka azy ireo ianao; Hanoro hevitra anao foana izy ireo ny safidy tsara indrindra ho an'ny bus na ny mpanazatra hofan-trano.
Inona no safidy tsara indrindra amin'ny fandoavana hofan-trano amin'ny mora indrindra amin'ny madrid?
Fikambanana matihanina isika ary manolo-tena ho antsika fanofana mpanazatra, fiara fitateram-bahoaka, microbus y minibuses. Ny seranan-tsambo fiara fitaterana dia azo antoka, mora ary mahomby. Manana farafahakeliny kely sy be dia be ny minibus, minibus, bus na coaches, isika 7 - 16 - 25 - 35 - 54 - 64 y Seza 71.
Fandaniam-bola amin'ny bisy mora, fiara fitaterana amin'ny mpamily Madrid April 4th, 2017Fampiofanana mpampiofana